Horudhac: Manchester United vs Arsenal… (Ka bogo rikoorrada la yaabka leh ee caawa la arki karo & Xaaladda xiddigaha labada naadi) – Gool FM
(Manchester) 02 Dis 2021. Waxaa caawa dhici doono kulanka ugu weyn ciyaaraha bartamaha toddobaadka horyaalka Premier League iyadoo ay Manchester United soo dhoweyneyso dhiggeeda Arsenal.
Man United ayaa u baahan inay waddada guulaha ee horyaalka Ingiriiska kusoo laabato kaddib labadii kulammadii ugu dambeeyay oo aysan guuleysan, waxayna haatan kaalinta 10-aad kula jirtaa 18 dhibcood, halka Gunners oo ciyaartii ugu dambeysay soo garaacday Newcastle United ay leedahay 23 dhibcood iyadoo fadhisa kaalinta shanaad ee kala sarreynta horyaalka.
Manchester United ayaa dib u heleysa kabtankeeda Harry Maguire oo soo dhammeystay ganaax hal kulan ahaa, waxaase shaki la gelinayaa inuu Luke Shaw ciyaari karo kulan kaddib dhaawacii uu ku seegayay labadii kulan ee ugu dambeysay, waxaana guud ahaan kulankan ka maqnaan doona Paul Pogba iyo Raphael Varane oo dhaawacyo qaba.
Dhinaca kale, Arsenal ayaa ka walaacsan xaaladda Bukayo Saka iyadoo shaki laga gelinayo kulankan dhaawac kasoo gaaray kulankii Newcastle awgiis, waxaase guud ahaan dhaawac ku maqnaan doona Granit Xhaka iyo Sead Kolasinac.
Manchester United ayaa halis ugu jirta inay toddobo kulan oo Premier League si xiriir ah ay guul ka qaadan weyso Arsenal markii ugu horreysay taariikhdeeda, halka Gunners ay ku dhowdahay inay labo ciyaarood oo xiriir ah kusoo adkaato Old Trafford horyaalka markii ugu horreysay tan iyo 1979.
Arsenal ayaa ku dhow inay markii ugu horreysay shabaqeeda ka difaacato Red Devils afar kulan oo xiriir ah halka lixdii jeer ee ugu dambeysay oo ay Masraxa riyada guul kusoo qaadato ay ciyaarahooda ku dhammaanayeen natiijo 1-0 ah.
Manchester United ayaa kaliya hal guul ka heshay siddeedii ciyaarood ee ugu dambeysay horyaalka Premier League iyadoo labo barbarro gashay shan jeerna dhegta dhiigga loo daray.
Red Devils ayaa halis ugu jirta in sanad gudihii ay garoonkeeda kula kulanto toddobo guuldarro markii ugu horreysay tan iyo 1986.
Man United ayaa sidoo kale diiwaan gelin karta inay garoonkeeda kula kulantay saddex guuldarro oo xiriir ah horyaalka iyadoo aanan wax gool ah dhalin markii ugu horreysay tan iyo 1963.
Arsenal ayaa toddobo guul ka heshay 10-keedii kulan ee ugu dambeysay horyaalka iyadoo labo barbarro gashay isla markaana laga adkaaday kaliya hal jeer.
Gunners ayaa guuldarro la’aan ah dhammaan siddeedii kulan ee ay gool ka dhalisay horyaalka xilli ciyaareedkan.
Pierre-Emerick Aubameyang ayaa noqon kara ciyaaryahankii ugu horreeyay ee isagoo Arsenal u ciyaara gool kasoo dhaliyo Manchester United saddex ciyaarood oo xiriir ah oo uu bannaanka ku booqday.
Salah oo ka hadlay dareenkiisa kaddib markii uu kaalinta toddobaad ka galay liiska abaal-marinta Ballon d'Or 2021